Yechipiri beta ye Android 13 yakatoburitswa | Linux Addicts
Yechipiri beta ye Android 13 yakatoburitswa
Darkcrizt | 17/05/2022 00:14 | Noticias
Google yakafumura kuburitswa kwechipiri beta vhezheni yeApple 13 uye mune iyi beta nyowani inoratidzwa pakati pekuvandudzwa kunoonekwa kumushandisi muAndroid 13 (zvichienzaniswa neyekutanga beta vhezheni, pane kunyanya kugadzirisa bug).
Wakawedzera iyo kugona kusarudza kupa mvumo yekuwana midhiya mafaera. Kwawaimbofanirwa kupa mukana kune ese mafaera pane yako yekuchengetera yenzvimbo kuti uverenge midhiya mafaera, iwe unogona ikozvino kurambidza kupinda kwemifananidzo chete, mafaera ekurira, kana mavhidhiyo.
A new interface yekusarudza mafoto nemavhidhiyo, iyo inobvumira iyo app kuwana chete yakasarudzwa mifananidzo nemavhidhiyo uye ichivharira kuwana kune mamwe mafaera. Pakutanga, chimiro chakafanana chakaitwa kune zvinyorwa. Zvinogoneka kushanda nemafaira emunharaunda uye data inobatwa pane cloud storage.
Mukuwedzera kune izvi, zvinoratidzwa zvakare kuti yakawedzera mvumo yekukumbira kuratidza zviziviso nemaapps. Pasina mvumo yekutanga kuratidza zviziviso, iyo app inovhara zviziviso kubva pakutumirwa. Zvemaapplication akavakirwa kare akagadzirirwa kushandiswa neakare mavhezheni eAroid, sisitimu inozopa mvumo pachinzvimbo chemushandisi.
Yakadzikisa huwandu hwemaapplication anoda kuwana ruzivo yenzvimbo yemushandisi. Semuyenzaniso, maapplication anoita mawireless network scanning haachada mvumo ine chekuita nenzvimbo.
The mabasa akawedzerwa ane chinangwa chekuvandudza kuvanzika uye kuzivisa mushandisi nezvengozi dzinogona kuitika. Pamusoro peyambiro nezve application clipboard kuwana, bazi idzva rinopa otomatiki kudzima kweclipboard yekuisa nhoroondo mushure meimwe nguva yekusaita basa.
Kune rimwe divi, zvinoratidzwa izvo seti yezvisarudzo zvakagara zvakagadzirirwa zvekugadzirwa kwemavara zvinokurudzirwa yeiyo interface, ichikubvumidza kuti uchinje zvishoma mavara mukati meiyo yakasarudzwa color scheme. Sarudzo dzemavara dzinokanganisa kutaridzika kwezvinhu zvese zveiyo inoshanda sisitimu, kusanganisira mapikicha.
Izvo zvakare zvakasimbiswa izvo mukana wekugadzirisa kumashure kweiyo icons chero application inopihwa kuchirongwa cheruvara rwedingindira kana ruvara rwemufananidzo wekumashure. Mumhanzi playback management interface, kushandiswa kwemifananidzo yezvivharo zvemadhisiki ari kuridzwa kunopiwa semashure.
Yakawedzera kugona kubatanidza marongero emutauro wega kune maapplication ayo akasiyana nemitauro yakasarudzwa muhurongwa.
Chiitiko chemushandisi pane zvishandiso zvine masikirini makuru akadai semapiritsi, Chromebooks uye smartphones pamwe kupeta zvikirini zvakavandudzwaIkozvino kune mahombe skrini, kurongeka kwemenu yekuzivisa yekudonha, skrini yekumba, uye system yekuvhara skrini yakagadziridzwa kuti ishandise ese aripo skrini real estate. Muchivharo chinooneka chine swipe gesture kubva kumusoro kusvika kuzasi, pamasikirini makuru, kupatsanurwa kunopihwa mumakoramu akasiyana ekukurumidza kuseta uye runyorwa rwezviziviso. Yakawedzerwa tsigiro yeaviri-pane modhi mugadziriso, umo zvikamu zvekugadzirisa zvino zvinogara zvichionekwa pamasikirini makuru.
Yakavandudzwa nzira dzekuenderana dzemaapplications, sezvo kuitwa kwebhari rebasa kwave kurongwa, iro rinoratidza zvidhori zvekushandisa zvikumbiro pazasi pechidzitiro, zvichikutendera kuti uchinje nekukurumidza pakati pezvirongwa uye unotsigira kufambiswa kwezvikumbiro kuburikidza neMulti-area multi-hwindo (split- skrini) dhonza-uye-kudonhedza interface, kupatsanura skrini kuita zvikamu zvekushanda neakawanda maapplication panguva imwe chete.
Chekupedzisira, zvakakosha kuti titaure kuti Android 13 inotarisirwa kuburitswa muchikamu chechitatu che2022 uye kune avo vanofarira kukwanisa kuyedza iyi itsva beta vhezheni, vanofanirwa kuziva kuti iyo firmware inovaka yakagadzirirwa Pixel 6/6 Pro, Pixel 5/5a zvishandiso 5G, Pixel 4/4 XL/4a/4a (5G). Android 13 miedzo yekuvaka inowanikwawo yekusarudza ASUS, HMD (Nokia nhare), Lenovo, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, Vivo, Xiaomi uye ZTE zvishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Yechipiri beta ye Android 13 yakatoburitswa
Kali Linux 2022.2 inosvika ine GNOME 42, Plasma 5.24 uye zvishandiso zvitsva.